Eyona nto iLahliweyo yePVC yeVinyl yoVavanyo lweGlavu uMvelisi kunye neFactory |Ilanga Elibomvu
Ukugqobhoza kunye nokukrazula kwaMahala-Iplastiki engqindilili ecacileyo ukunqanda ukukrazula kunye nokugqobhoza kodwa ukolula okwaneleyo ukuze kube bhetyebhetye kweminwe.
Umqobo owomeleleyo - Kwikhitshi okanye ukucoca, ezi glavu zibonelela ngomqobo kwiikhemikhali, izivumba njl.
I-Ambidextrous Fit egqibeleleyo-Ilingana kakuhle nesandla sasekunene nesasekhohlo ukunqanda ukubhideka.
Multi-Purpose-Iiglavu ezingenamgubo, zilungile njengeiglavu zenkonzo yokutya, iiglavu zokucoca, iigloves zokhathalelo, iigloves zangaphambi kokutya nokunye okuninzi.
Iiglavu zePVC ezilahlwayo ziiglavu zeplastiki ezilahlwayo zepolymer, ezizezona mveliso zikhawulezayo ziphuhlayo kwishishini leeglavu ezikhuselayo.Abasebenzi bokhathalelo lwezempilo kunye nababoneleli benkonzo yeshishini lokutya banomdla kwiiglavu zePVC kuba zikhululekile ukunxiba kwaye zibhetyebhetye ekusebenziseni.Aziqulathanga nayiphi na i-latex yendalo kwaye azibangeli ukusabela komzimba.
Ukukhululeka ukunxiba, ukunxiba ixesha elide akuyi kubangela ukuqina kwesikhumba.Kulungile ukujikeleza kwegazi.
Musa i-amino compounds kunye nezinye izinto ezinobungozi, azifane zivelise i-allergies.
Amandla okuqina okuqinileyo, ukuxhathisa kwe-puncture, akukho lula ukonakalisa.
Ukutywinwa okulungileyo, okona kusebenza ukukhusela uthuli ngaphandle.
Ukumelana nemichiza ephezulu, ukuchasana neph.
I-silicon yasimahla, ineempawu ezithile ze-antistatic, ezifanelekileyo kwiimfuno zemveliso yombane.
Iintsalela zeekhemikhali ezingaphezulu, umxholo we-ion ophantsi, umxholo wamasuntswana, olungele indawo engqongqo yegumbi elingenathuli.
Umsebenzi wasekhaya, i-electronics, iikhemikhali, i-aquaculture, iglasi, ukutya kunye nolunye ukhuseleko lwefektri, izibhedlele, uphando lwezenzululwazi kunye namanye amashishini asetyenziswayo; Isetyenziswa ngokubanzi kwi-semiconductor, izinto ze-elektroniki ezichanekileyo kunye nokufakelwa kwesixhobo kunye nokusebenza kwezixhobo zentsimbi ezincangathi, ukufakwa kwemveliso yobugcisa obuphezulu kunye debugging, disc actuators, composite materials, LCD ukubonisa iitafile, imigca yokuvelisa ibhodi yesekethe, iimveliso zamehlo, iilabhoratri, izibhedlele, iisaluni zobuhle kunye namanye amacandelo.
Inkqubo yemveliso yemveliso
Ukuhlolwa kwemathiriyeli ekrwada → ukwamkelwa → ukuxuba → ukubonwa → ukuhluza → ukucocwa kogcino → ubhaqo → ukusetyenziswa kwe-intanethi → ukufakwa kwi-intanethi → ukufakwa ngokuthe nkqo → ukumisa ukomisa → ukubumba iplastiki → ukupholisa → ukufakwa kwePU okanye umgubo omanzi → ukuthotywa ngokuthe nkqo → ukomisa → ukupholisa → ukupholisa → ukupholisa ukuhluba kwangaphambili → ukonakalisa → ukuguqulwa → ukuhlola → ukupakishwa→ ugcino → uhlolo lokuthumela ngenqanawe → ukupakisha ukuthunyelwa.
Ngaphambili: Ubushushu be-Oveni yesikhumba obuNganyangekiyo kwi-BBQ iiglavu zoBubushushu obuPhakamileyo 800 Degrees iBarbecue Grill iiglavu zesikhumba
Okulandelayo: Inkomo enesiqingatha esisiqindiweyo yesundu yahlulwe isebenza iglavu yesikhumba efikelelekayo
I-Pvc ende ende yeeglavu zasekhaya zokuvasa izitya...
Intengiso eshushu i-68cm ye-Red Pvc yoKhuseleko lwezandla kwishishini ...
IPvc enamachaphaza eNdalo yeGlove yeLaphu eMqhaphu eMqhaphu eSt...
Ukuthengisa okushushu kwe-ESD ye-Antistatic Pu Plam ...
Pvc Industrial Coating Work Hand Glove Supplier...